February 2013 ~ ဆုံနေကြ
သစ်ခိုးထုတ်မှုများ “ ကျွန်းပွဲတော်” ဟုခေါ်ရလောက် အောင်ရှိနေ
ထွန်းထွန်း ဓာတ်ပုံ(momeikfoum.blogspot.com) မဘိမ်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၅။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မဘိမ်းမြို့နယ်တွင် KIAကချင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့နှင့် တရုတ်သစ်ကုန်သည်များ ပူးပေါင်း ကာ တရားမဝင် ကျွန်းသစ်များနှင့် အခြားသစ်မာသစ်များကို တရုတ်ပြည်သို့ ခိုးထုတ် နေကြသည်ဟု မိုးမိတ်မြို့မှ ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ မဘိမ်းမြို့နှင့် မိုင်နှစ်ဆယ်ကျော် ကွာဝေးသော ပင်ကြိမ်၊ တုံကွာ၊ စီပိန်း၊ နမ့်ဟွန်၊ နမ့်ဟန်၊ မိုင်းတုံရွာစဉ်များ တလျှောက် ရှိ တောထဲမှ သစ်များကို ၎င်းအဖွဲ့များက သစ်များခိုးထုတ် သယ်ယူနေကြောင်း၊ နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း သစ်များ ခိုးထုတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ တရား မ၀င်သစ်များသည် ဗန်းမော်မှောင်ခို တောလမ်းမှတဆင့် တရုတ်ပြည် နယ်စပ်သို့ ပို့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ရက်လျှင် သစ်ခိုးထုတ် ကားအစီး ရေ(၂၀၀)ကျော်ထိ ရှိကြောင်း ထိုသစ်လုပ်ငန်းတွင် ဈေးရောင်းချနေသူများက ပြောကြသည်။
ယင်းသို့ သစ်ခိုးထုတ်မှုများကြောင့် ရွာနီးစပ်မှ ဒေသခံ ရွာသူ ရွာသားများသည် ၎င်းနေရာ၌ အလုပ်ဝင်လုပ်ကာ ဝင်ငွေ ကောင်းနေကြောင်း၊ တစ်ရက်လျှင် သစ်ခုတ်သားတစ်ဦး၏ အနည်းဆုံးဝင်ငွေသည် နှစ်သောင်းမှ လေးသောင်းထိ ပုံမှန်ရှိပြီး မိမိလုပ်ကိုင်နိုင်သလေက် တစ်ရက်လျှင် ခုနှစ်သောင်းအထိ ဝင်ငွေရှိနေကြောင်း ယင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော ဒေသခံများ ပြောကြသည်။ ၎င်းသစ်ခိုးထုတ်တောထဲ၌ ဈေးရောင်းဈေးဝယ် လုပ်နေသူ ကိုသိန်းဇော်က “ဆောင်းအကုန် နွေအကူး အစပ်ရောက် တိုင်း KIAလက်နက်ကိုင်တွေကတရုတ်သစ်ကုန်သည်တွေနဲ့ နှစ်တိုင်း လိုလို တောတန်းတလျှောက် တရားမ၀င် သစ်တွေ ခုတ်လှဲ၊ သယ်ထုတ် နေကြတာပါ။
ဘယ်သူမှလည်း မပြောရဲရှာဘူး။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ တရုတ် သစ်ကုန်သည်တွေဟာ နီးစပ်ရာ ရွာက ဒေသခံတွေကို ပိုက်ဆံများများပေးတယ်။ ဒေသခံတွေ ၀င်ငွေကောင်းတယ်။ နောက်ဆုံးသူတို့ ယာခင်းကိုတောင်ပစ်ပြီး သစ်ခုတ်၊ သစ်သယ် အလုပ် ၀င်လုပ်ကြတယ်။ ၀န်းကျင်မြို့တွေ က ဒေသခံတွေလည်း လာကြတော့ သစ်ခိုးထုတ်နေတဲ့ တောထဲမှာ ပွဲတော်တစ်ခုလို ဖြစ်နေရတာမို့ 'ကျွန်းပွဲတော်' ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပါ ” ဟုပြောကြားသည်။
မိုးမိတ်၊ မဘိမ်းမြို့မှ သစ်တင်ကားများ သာမက မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်းမှ သစ်တင်ကားများပင် ယင်းသစ်ခိုးထုတ် ရာ၌ လာရောက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြသည်။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းမျှ လာရောက်ဖမ်းဆီး အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုး ယနေ့ထိ မရှိသေးကြောင်း၊ သစ် များလည်း ကုန်သလောက်ဖြစ်နေ၍ စခန်းသိမ်းချိန်ပင် ရောက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ မဘိမ်းသစ်တော ဦးစီးဌာနအား ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အကြိမ်ကြိမ် ဖုန်းခေါ်ခဲ့သော်လည်း ဖုန်းမကိုင်သောကြောင့် မဘိမ်းမြို့နယ် ရဲစခန်းမှူး ဦးနော်ခမ်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ၎င်းက “ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လည်း ကြားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တရားဝင် သတင်းလို့ အတည်ပြု ပေးလို့ မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လုံခြုံရေး အခက် အခဲရှိနေလို့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် မသွားရဲ၊ မလာရဲ ဖြစ် နေတာ မို့ သတင်းအမှန်ပါလို့ ပြောခွင့်မရှိတာပါဗျာ” ဟု ပြောကြားသည်။ ယင်းကြောင့် မြန်မာ့ရေမြေအရင်းအမြစ်များသည် နိုင်ငံအတွက် ၊ပြည်သူေ တွအတွက်မခံစား၊ မစံစားရဘဲ တဖက်နိုင်ငံက ကိုလို နီစီးပွားရေးသမားတွေ လက်ထဲသို့သာ“၀”ကွက် အပ်လိုက်သလို ဖြစ်နေကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဒေါ်လာသန်းချီ အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဘာကြောင့် အရေးယူမခံရတာလဲ ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေ ရှိနေတာလဲ
ပေးပို့သူ = ရဲရင့်
ဖေဖော်ဝါရီလ နွေဦးရောက်ပြီဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း နေပြည်တော်မြို့တော်ကြီးရဲ့ အပူချိန်ကတော့ ရေနွေးအိုးမတည်ရဘဲ လက်ဖက်ခြောက်ခပ်သောက်လို့ရမယ့် အနေအထားပါပဲ.။ ဒီနေ့ ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အိမ်ရှေ့က မန်ကျည်းပင်ရိပ်အောက်မှာ အေးအေးလူလူ ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖတ်နေတုန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့ တူတော်မောင်အရာရှိ ရောက်လာပြီး . “ဘကြီး နေကောင်းလား . ဘာတွေဖတ်နေတာတုန်း” လို့ မေးရာ “အေး. အတော်ပဲကွာ. ဘကြီးလည်း တူမောင်ကို မေးချင်. သိချင်တာလေးတွေ ရှိနေတာနဲ့ အတော်ပဲ” ဟု ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်. “ဘာတွေ သိချင်နေတာလဲ ဘကြီးရ” ဟု တူမောင်က ပြောရာ ကျွန်တော်လည်း . “ဟို တလောကကွာ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဘကြီးဖတ်လိုက်ရတယ်။
တူမောင်တို့ ဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းနဲ့ အထွေထွေမန်နေဂျာ/အင်ဂျင်နီယာချုပ်စတဲ့ အရာရှိကြီး(၈)ဦးကို မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းနဲ့ အဆောက်အဦ စရိတ်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေ တင်ပြတောင်းခံရာမှာ ပိုမိုတွက်ချက်တင်ပြပြီး ထုတ်ယူတာကြောင့်ရယ်၊ စက်ကိရိယာ ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ယူရာမှာလည်း ဈေးလျော့ဝယ်ယူတာတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံပိုင်ငွေတွေကို ထုတ်ယူအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်မှု ပအမှတ် ၆/၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၄၀၉ နဲ့ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်က ဘုရားကုန်းရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်အရေးယူတော့မယ်လို့ ဘကြီးဖတ်လိုက်ရတယ်ကွ၊ ဒါပေမယ့် အခုချိန်ထိ အဲဒီအကြောင်း ဘာမှထပ်မကြားတော့လို့ ပြီးများသွားပြီလား၊ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲလို့ သိချင်နေတာ ကွ တူမောင်ရ” ဟု ပြောလိုက်ရာ
ကျွန်တော့တူတော်မောင်က ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး ဒါက ဒီလိုရှိတယ် ဘကြီးရဟုဆိုကာ သူတို့ဝန်ကြီးဌာနက သတင်းတွေအားလုံးကို ပြောပြပါတော့တယ်. “ဘကြီးပြောတဲ့ ပထမသတင်းက မှန်တယ်ဘကြီးရ. အမှုလည်းဖွင့်ပြီး နောက်နေ့မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနကို စသုံးလုံးကလူတွေရောက်လာပြီး လူကြီးပိုင်းတွေကို စပြီးစစ်တော့တာပဲ. သူတို့ရုံးခန်း တွေထဲက ကွန်ပျူတာတွေ၊ ဖိုင်တွေ၊ ဖုန်းတွေ အားလုံးကို သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး အကုန်စစ်တော့တာပဲ ဘကြီးရ.” ဟု ဆိုကာ ဆက်ပြောပါတယ်. “နောက်ပြီး စစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ဝန်ကြီးဆီကို ဦးသိန်းဝင်းက ငွေလွှဲပေးတဲ့ပြေစာတွေ အင်တာနက် ပေါ်ရောက်လာတော့ ပိုဆိုးတော့တာပေါ့ ဘကြီးရာ. စစ်စစ်ချင်း အစောပိုင်းမှာတင် စာရင်းကွာတာ တွေ၊ ငွေကွာတာတွေ၊ ပစ္စည်းဈေးနှုန်းကွာတာတွေ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေတင်သွင်းဝယ်ယူတဲ့ နေရာမှာ နိုင်ငံတော်ကိုတန်ဖိုးများများစာရင်းပြ ကုမ္ပဏီနဲ့ညှိပြီး အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေ သွင်းတာတွေ တွေ့တာပေါ့ဘကြီးရာ.
ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီတစ်ခါတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး တကယ်အရေးယူပြီလို့ ထင်တာပေါ့ဘကြီးရာ. အခုကြတော့ အဲဒီလို မဟုတ်တော့ပြန်ဘူး ဘကြီးရ.” ဟု ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း အတော်စိတ်ဝင်စားသွားပြီး “ဟေ ဟုတ်လား ဘကြီးသိချင်နေတာ အဲဒါကွ. ဆက်ပြောပါအုံး” ဟု ပြောလိုက်ပါရာ “စစချင်းတော့ သူတို့ပဲပေါ. နောက်တော့မှ ဘကြီးရေ- စစ်လိုက်တာ တစ်နွယ်ငင် တစ်စင်ပါ ဆိုသလိုပေါ့. အခုလိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေက အခုဒီဝန်ကြီးလက်ထက်ကြမှ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး၊ အရင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းဇော်လက်ထက်ကတည်းက ဖြစ်နေတာ ဘကြီးရ၊ ဇာတ်လမ်းက အရှုပ်ကြီးရယ်၊ စာရင်းဇယားတွေ အကုန်လုံးကို စစ်တာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အပြင်ကကုမ္ပဏီတွေလည်း ပါတာပေါ့ ဘကြီးရာ၊ အဲဒီထဲမှာ ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ Project တွေ အများဆုံးရတဲ့ ကုမ္ပဏီက RedLink ကုမ္ပဏီလေ.” “RedLink ကုမ္ပဏီကို ဘကြီးသိလား” လို့ တူတော်မောင်က စကားဖြတ်ပြီးမေးလိုက်ရာ
”အင်း မြင်တော့ မြင်ဘူးတယ်. ကြေငြာတွေထဲမှာ တွေ့တာလေ” ဟု ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်. ဒါနဲ့ တူတော်မောင်က . “အဲဒီကုမ္ပဏီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီး ဦးရွှေမန်းရဲ့သား တိုးနိုင်မန်းပိုင်တာ ဘကြီးရ၊ ဒါကြောင့်မို့ ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ Project တွေ အများကြီးကို သူတို့ရတာပေါ့. အခုဒီမှာ ပြဿနာလည်းဖြစ်ရော ဟို.စသုံးလုံးအဖွဲ့တွေက သူတို့ကိုပါခေါ်ပြီးစစ်တာပေါ့. အဲဒါ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ RedLink နဲ့ပေါင်းပြီး စာရင်းလိမ်ပြထားတာတွေ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စတွေ၊ အခွန်ရှောင်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီး အများကြီး ပေါ်လာတာပေါ့ဘကြီးရာ. ဇာတ်လမ်းက အဲဒီမှာ စတာ ဘကြီးရ. ဝန်ကြီးနဲ့ အစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ လူကြီးတွေကလည်း သူတို့ကို ဖော်ထုတ်ရင်. သူတို့ကလည်း အရင် ဝန်ကြီးဟောင်းတွေ၊ လက်ရှိဝန်ကြီးတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတွေရဲ့ လာဘ်စားထားတဲ့အကြောင်း တွေ၊ သူတို့ကို ခွဲဝေပေးရတဲ့အကြောင်းတွေ၊ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားသမီး.တွေကို လုပ်ကိုင်ခွင့် Project တွေ ပေးရတဲ့အကြောင်းတွေကို ဖော်ကောင်လုပ်မှာလို့ ပြောလိုက်တယ်. အခုကျွန်တော် နောက်ဆုံး သိရတာကတော့ သူတို့ကိုသာ အရေးယူမယ်ဆိုရင် သူတို့ဖော်ကောင်လုပ်မယ့် အချက်အလက်တွေကို ပြုစုပြီးပြီလို့ သိရတယ်ဘကြီးရ. အဓိကကတော့ RedLink ကုမ္ပဏီနဲ့ ပေါင်းပြီး နိုင်ငံတော်ကို ညာထားတဲ့အချက်တွေပေါ့ ဘကြီးရာ. အဲဒီကုမ္ပဏီက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီး ဦးရွှေမန်းရဲ့သား ပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်နေတော့ သူပါ သိက္ခာကျ၊ အရှက်ကွဲရမယ့် အခြေအနေလေ. ဒါကြောင့်မို့ အခုတော့ ဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းနဲ့ အဖွဲ့ အရေးယူမခံရဘဲ ရှိနေတာကို လွှတ်တော်ကလည်း ဘာမှမပြောရဲ၊ မလုပ်ရဲ မကိုင်ရဲဖြစ်နေတာပေါ့ ဘကြီးရ”လို့ ပြောလိုက်တော့မှ ကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်ပါတော့တယ်။
နိုင်ငံရေးသမားဆိုပြီး ရင်ကော့ထွက်လာမည့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များကို မျှော်လင့်လျက်ရှိ
Monday, February 25, 2013 လပြည့်ဝန်း2comments
နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်အတွက် မိမိကိုယ်ကို နိုင်ငံရေးသမား ဟုဆိုကာ ရင်ကော့ထွက်လာမည့် မျိုးဆက်သစ် လူငယ် များကို မျှော်လင့်လျက်ရှိကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်း သားခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီးက ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တော်ဝင် နှင်းဆီ၌ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂမှ ကျင်းပ ပြုလုပ်သော စာပေဟောပြောပွဲတွင် ပြောကြားသည်။ “နိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေ လေးလေး နက်နက် စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တာဝန်အကြီးကြီး တွေ ယူထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက် မှားရင် သန်း ၆၀ လုံးရဲ့ ဘဝတွေ ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်” ဟု ယင်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး ပြဿနာမှာ မိမိကိုယ်ကို နိုင်ငံရေး သမားဟု ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မပြောရဲခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း။ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်နေပြီဆိုသော် လည်း ယင်းတို့မှာ အစစ်အမှန် မဟုတ်သေးကြောင်း။ မြန်မာပြည်၏ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှုသည် သာမန်ပြဿနာ မဟုတ်ဘဲ ကြီးထွား သည်ထက် ကြီးထွားလာနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ပြောကြားသည်။ “ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေဟာ မရေမရာနဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် နား၊ မျက်စိတွေကို ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အစိုးရထားခဲ့တဲ့ ပုံစံခွက်တွေသာ ပြောင်းချင် ပြောင်းသွားမယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ပုံစံခွက်ဟာ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲဘူး။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတာ ကျောင်းသားလွှတ်တော်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသားရှိရင် ကျောင်း သားလွှတ်တော်ဟာ ရှိကို ရှိရမယ်” ဟု ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြောကြားသည်။
တိုင်းပြည်ကို ခေါင်းဆောင်မည့် လူငယ်များအနေဖြင့် အတွေ့ အကြုံများကို မျှဝေပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်ချစေချင်ကြောင်း၊ ကွဲပြားတက်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြင်အောင်ကြည့်၍ လူငယ် အားလုံး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လူကြီးများအနေဖြင့် ငယ်ရွယ်သည့် လူငယ်များကို ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပြည့်အဝ ပေးအပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးကိုကိုကြီးက ပြောကြားသည်။ “သန်း ၆၀ လုံးကို ရုန်းထဖို့ သူတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးပေးဖို့ဆိုရင် ဒေါင်ဒေါင်မြည် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ရှိနေဖို့ လိုတယ်။ အလုပ်အကိုင် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ နိုင်ငံရေးသမားလို့ ရင်ကော့ပြီး ပြောနိုင်တဲ့ လူငယ်တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ လိုအပ်တယ်” ဟု ယင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
လူငယ်များအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို လူငယ်များ ကြားတွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့စေလိုကြောင်း၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုသည်မှာ ကျောင်းသားများ၏ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပြီး လူငယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လူငယ်များ၏ ယုံကြည်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ ခံယူချက်များ အတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားကြရန် လိုအပ်ကြောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်း သားများ သမဂ္ဂကိုယ်စား ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သမဂ္ဂမှ ကိုနေမျိုးဆက်လူက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မှ လိုင်ဇာအထိ ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးရှည် လမ်းလျှောက်လာနေတဲ့ ဘုန်းကြီး ၁၅ပါး၊ လူ၄၇ယောက် နဲ့ အမျိုးသမီး၁ ယောက်တို့ပါတဲ့ အဖွဲ့ဟာ ပုလိပ်မြို့ ပုလိပ်ဘုရားဝင်းအတွင်းရှိ မူလငါးဆူ ကျောင်းတိုက်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဒီနေ့ အခုကျောင်းမှာပဲ ညအိပ်ကြမှာပါ။
မြင်းခြံကနေလမ်းလျှောက်လာတဲ့ ဘုန်းကြီး ၃ပါးနဲ့ လူ၃ယောက်ဟာလဲ ခုလောလောဆယ် ပုလိပ်မြို့အတွင်း သို့ ဝင်ရောက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စားသုံးခြင်းအားဖြင့် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှု့ကို ကာကွယ်မှု့ပေးနိုင်သလို ကင်ဆာအမြစ်များပြန့်ပွားမှု့ကိုလည်း ရပ်တန့်စေတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်များက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း မှာပါဝင်တဲ့ ဓာတုဒြပ်ပေါင်း တမျိုးဟာ အသားပိုကျူမာဆဲလ်များ ကြီးထွားလာမှု့ကို တိုက်ခိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှာ Sulforaphane ဆိုတဲ့ကင်ဆာကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဓာတုဒြပ်ပေါင်းဟာမြင့်မားစွာ ပါရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကင်ဆာဆဲလ်များပြန့်ပွားမှု့ကို သတ်ပစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ Michigan Comprehensive Cancer Centre တက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံပညာရှင်များဟာ ကြွက်နှင့် အခြားဆဲလ်များကိုအသုံးပြုပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းမှာစမ်းသတ်ခြင်းများပြုလုပ်မှု့မှာ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပါမောက္ခ Duxin Sun က ရင်တုန်းက စမ်းသပ်ခဲ့မှု့တွေမှာ Sulforaphane ဟာ ကင်ဆာရောဂါအတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဘဲသိရှိခဲ့ရပါတယ်။
အခုစမ်းသပ်မှု့မှာရရှိခဲ့တဲ့ ရလဒ်ကတော့ ရင်သားကင်ဆာရဲ့ Summaryပင်မဆဲလ်များ ပြန့်ပွားမှု့ကို တားဆီးနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိရှိခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ပျှမ်းမျှ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများမှာ ၄၆ဝဝဝ ခန့် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နေပြီး ၁၂ဝဝဝ လောက်ဟာလဲ ရင်သားကင်ဆာရောဂါကြောင့် သေဆုံးနေကြရပါတယ်။
လက်ရှိ ဓါတုကုထုံးများဟာလဲ ကင်ဆာရဲ့ ပင်မဆလ်များ ပြန့်ပွားမှု့ကို မတားစီးနိုင်သလို ဘာကြောင့် ဒီရောဂါဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာလဲ အတိအကျမသိသေးဘူးလို့ သုတေသီများက ပြောပါတယ်။ သူတို့ယုံကြည်ထားတာကတော့ ကင်ဆာဖြစ်တဲ့ ပင်မဆလ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ပြန့်ပွားတဲ့အမြစ်များကို ထိန်းချူပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ လေ့လာချက်များကတော့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း အတွင်းမှ Sulforaphane ဓာတုဒြပ်ပေါင်းကိုနုတ်ယူပြီး ကြွက် ထဲသို့ထိုးထဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာမှ ဆဲလ်များကဲ့သို့သော ဆဲလ်များကိုယူပြီး စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲ ပြန့်ပွားကြီးထွားတဲ့ ဆလ်အရေအတွက် လျော့ကျသွားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ စမ်းသပ်မှု့များမှ သိရှိခဲ့ကြရပါတယ်။
sulforaphane ဓါတုဒြပ်ပေါင်းဟာ ကင်ဆာဆဲများ ပြန့်ပွားမှု့အရေအတွက်ကို လျော့ကျစေသလို ဆိုးကြိုးအနေဖြင့်လဲ ပုံမှန် ဆလ်များကို အနည်းငယ် ထိခိုင်မှု့ရှိတယ်လို့ တိုင်းတာသိခဲ့ရပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာ ရောဂါခံစားနေရတဲ့ လူနာများနဲ့တော့ စမ်းသပ်ခြင်းမပြုလုပ်ရသေးပါဘူး။ သို့သော်လည်း ဝေဒနာရှင်များကိုတော့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စားကြဖို့ နဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှာပါတဲ့ sulforaphane ဓါတုဒြပ်ပေါင်းဟာ ကင်ဆာဆဲများ ပြန့်ပွားမှု့အရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်ကြောင်း အကြံဥာဏ်ပေး ပြောထားပါတယ်။
အရသာခါးသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လူတွေကသိပ်မကြိုက်ကြပါဘူး။ အဲ့ဒီအထဲမှာ အမေရိကန်သမ္မဟောင်း George W. Bush လဲပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော် အရသာခါးသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာအကျိုးရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် စစ်သားဟောင်းတစ်ဦးပါ။ တိတိပပပြောရရင်တော့ ကျွန်တော် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းတချို့ကို ထိတွေ့ခွင့်ရသူတစ်ဦးပေါ့လေ။ အခုတော့ သတင်းလေးတွေဖတ်ရင်း စဉ်းစားမိတာလေး မြင်မိတာလေးတွေ ချရေးမိတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တဲ့အချိန် ကျွန်တော် ရင်တဖိုဖိုနဲ့စောင့်ကြည့်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရင်ဖိုရတာ အမောသားဖြစ်သွားစေတဲ့ အကြောင်းက အရင်ဝန်ကြီး (၆) ဦးကို မဖြုတ်ဘဲ သမ္မတက သူ့အနားကို ခေါ်ထာလိုက်ခြင်းပါပဲ။
တခြားသူတွေ ဘေးချိတ်လို့ အရင် စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးစိုးသိန်း ပါလာတာကိုက တိုင်းပြည်နေ ပြည်သူလူထုအတွက် ရတက်မအေးစရာပါပဲ။ သူဟာ နေရာတကာ နေရာရလိုတဲ့အတွက် သူ့ကိုယ်သူ lobby လုပ်နေသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ဆိုတဲ့ ဥက္ကဌထိုင်ခုံမှာ အမြိုင့်သားထိုင်ရင်း တိုင်းပြည်ကို ရောင်းစားနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးစိုးသိန်းဆိုတာက တပ်မတော်ရေတပ်စခန်းမှုး အဆင့်လောက်ကနေ ရေတပ်ဦးစီးချုပ်၊ နောက်တော့ စက်မှုဝန်ကြီးအဆင့်ထိတက်ဖြစ်၊ အခု သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးအဆင့်ထိ ရောက်နေတဲ့ ဒုသမ္မတတွေ နေရာပျောက်လောက်အောင်ကို သမ္မတကို အိပ်ထောင်ထဲ ထည့်ထားသူလို့ သူ့ကိုယ်သူကြုံးဝါးတတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း သူအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဌာနတွေထဲမှာ ကြိုက်သလို စုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ သူလုပ်ခဲ့တာတွေထဲက တိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေ ဖြုန်းတီးပြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ စက်မှု (၁/၂) ဝန်ကြီး၊ MIC ဥက္ကဌဘဝမှာတုန်းက ပြည်ပကနေ ပစ္စည်းဝယ်ရင် Board အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ သဘောတူညီချက်၊ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အမြင်တွေနဲ့ဝယ်ဖို့ သူ့ကို အထက်လူကြီးတွေအနေနဲ့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
ဝန်ကြီးဘဝတုန်းကတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဘဝတုန်းက ရေတပ်အတွက် ပစ္စည်းတွေ ဝယ်တာမှာ သူကိုယ်တိုင် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ဝယ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလာဘ်မြင်တာ နိုင်ငံအတွက်လား သူ့အတွက်လားတော့ မသိပေမယ့် သေချာတာတော့ ရေတပ်မှာသုံးရတဲ့ 108 m freegate ၂ စီးကတော့ သုံးစားလို့မရဘူးဆိုတာ ရေတပ်အရာရှိတွေအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ချင်သလိုလုပ်တဲ့ ဥပဒေလွတ်လုပ်ရပ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို အထက်လူကြီးတွေက သိပ်တော်သိပ်တတ်တယ်လို့ ချီးကျူးခံချင်တဲ့ သူတော်ယောင်စိုးသိန်းဟာ သူ့ကိုယ်သူ လည်း Lobby သိပ်လုပ်ပါတယ်ဆိုတာ တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။
၂၀၀၉-၂၀၁၀ လောက်တုန်းက မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်နဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကနေ အမြတ်ငွေကို ၂ ဆကျော်လောက် စာရင်းလိမ်ပြခိုင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စမျိုးတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဇာတ်လမ်းပျောက်လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းကတော့ ဘဏ္ဍာရေး ညွှန်ကြားရေးမှုးဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးကို အငြိမ်းစားပေး လိုက်တာပါပဲ။ သူ့လုပ်ရပ်ကို အဲဒီတုန်းက ဘဏ္ဍာရေးညွှန်ကြားရေးမှုးဖြစ်သူလည်း ကောင်းကောင်း သိပါတယ်။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို ဖောက်ထုတ်ရင်း အိပ်ထောင်ထဲထည့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ လုပ်ရပ်တွေထဲမှာ လုပ်ရပ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက တာတာကုမ္ပဏီကိစ္စလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
တာတာကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ၁၀ ဘီးကားတွေ တစ်နှစ်ကို အစီးရေ (၁၀၀)ထုတ်ဖို့အကြောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ ဂျာနယ်တွေ မီဒီယာတွေထဲမှာ ပါခဲ့ဖူးတာကို မှတ်မိကောင်း မှတ်မိနိုင်မယ့်သူတွေ ရှိပါတယ်။ မကွေးမှာ စက်ရုံတည်တော့ ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဆေးစိမ်တဲ့စက်ဝယ်ဖို့ပြင်ပါတယ်။ အဲဒီစက်တန်ဘိုးက အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇)သန်းလောက် တန်ပါတယ်။ ကာလတန်ဘိုးနဲ့သင့်ရင် မြန်မာငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ခြောက်သောင်းသုံးထောင်ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီငွေတွေဟာ စက်ရုံနေ့စားအလုပ်သမားပေါင်း ၁၀၀၀ အတွက် (၇)နှစ်စာ ရှိပါတယ်။ သေးသေးလေးမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီစက်ကို ဒုတိယဝန်ကြီးအပါအဝင် အခြားသောပြောရေးဆိုခွင့် ရှိတဲ့သသူတွေက မလိုအပ်တဲ့ အတွက်မဝယ်ဖို့ ကန့်ကွက်ပေမယ့်လည်း တစ်ဦးတည်းသဘောနဲ့ ရအောင်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲသလို လုပ်ချင်သလို အာဏာကိုအသုံးချ၊ ပြည့်သူ့ဘဏ္ဍာကို စီရင်ချင်သလို စီရင်လိုက်လို့လည်း အကောင်းဖြစ် လာသလားဆိုတော့လည်း မဖြစ်လာပါဘူး။
စက်ရုံကြီးတော့ ကုန်ချင်သလောက်ကုန် ဆောက်ချင် သလိုဆောက်၊ ဝယ်ချင်တာတွေ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်၊ ပွဲစားခတွေ အိပ်ထဲမြိုးမြိုးမြတ်မြတ် ထည့်လို့ အိန္ဒိယကနေ ၁၀ ဘီးကား အစီး (၈၀)လောက် သွင်းပြီး လုပ်ငန်းကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စောစောကပြောခဲ့တဲ့ ဆေးစိမ်တဲ့စက်ဆိုတာ သုံးတောင်မသုံးလိုက်ရပါဘူး။ အဲဒီ သုံးမရတဲ့ စက်ကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဝယ်လိုက်ပြီး ဘဏ္ဍာကိုဖြုန်းတီးလိုက်တဲ့အတွက် အလုပ်သမား လူတန်းစားနဲ့ ပြည်သူလူထု နစ်နာခဲ့ပါတယ်။
ပေးပို့ သူ - ဇူရီ။
မီးကျည်ဗုံးထိမှန်ပြီး ဘယ်ဘက် မျက်လုံးကွယ်သွားသော သံဃာတစ်ပါး..(ဓါတ်ပုံ - မန်းသားလေး/ ဧရာဝတီ)
လက်ပံတောင်း ကော်မရှင်က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစောင်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ထပ်မံ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ကော်မရှင်အနေနဲ့ ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာသာ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီး အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်သည့် အခါမှသာလျှင် အသေးစိပ် တွေ့ရှိချက်တွေကို ထုတ်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ယူသည့် လက်ပံတောင်း ကော်မရှင်ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အပြည့်အစုံကို ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်ကို အောက် မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် စုံညီ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့ ၁၃:၃၀ ချိန်တွင် လွှတ်တော်ဝင်း (အိုင် ၁၂) အဆောင်တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာ ပြုစုရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ ဆွေးနွေးရာတွင် ကော်မရှင် ဥက္ကက အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ရေးဆွဲရာတွင် ကျင့်သုံးရမည့် အခြေခံမူ များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ရာ ထိုအခြေခံမူများပေါ်တွင် အစည်းအဝေး တက်ရောက် လာကြသော ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါသည်။
၃။ ထို့ပြင် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တို့သည် ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက်နေ့မှ (၇) ရက်နေ့အထိ ထပ်မံ ကွင်းဆင်း လေ့လာပြီး သီတဂူအာယုဒါန ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါးကုသနေကြသော သံဃာတော်များ၏ ကျန်းမရေး အခြေအနေကိုလည်းကောင်း မုံရွာခရိုင်၊ မံရွာဆေးရုံတွင် အုတ်ကန်ပြိုကျပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိ သဖြင့် ဆေးကုသခံနေသူ အမျိုးသမီးကြီး၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကိုလည်းကောင်း ကော်မရှင်သို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။ သီတဂူအာယုဒါနဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံယူလျက်ရှိသော သံဃာ (၆) ပါးအနက် (၃) ပါး သည် ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့တွင် ဆေးရုံဆင်းသွားပြီးဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရှိရပါသည်။
၄။ ကော်မရှင်အား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၅/၂၀၁၂) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခဲ့ ရာ တွင် ကော်မရှင်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လကုန်တွင် တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုတာဝန်ပေးချက်အရ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက် နေ့ တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဥထုတ်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သော ကော်မရှင်၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက် နေ့တွင် ထုန်ပြန်ခဲ့သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၃) တွင်လည်း အဆိုပါ အစီရင်ခံစာသည် ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာရန် မဟုတ်ကြောင်းဖြင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်သည့်အခါမှသာ အသေးစိတ် အချက်အလက်တို့ကို ထုတ်ပြန် ကြေညာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ထပ်လောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။
နှင်းဆီခရီးသည်မော်ဒန်အငြိမ့် ပထမည ပရိသတ် သုံးထောင်ဝန်းကျင် လာရောက်ကြည့်ရှု
နှင်းဆီခရီးသည်မော်ဒန်အငြိမ့်ကို ပြည်သူ့ရင်ပြင်၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက် ည ၈ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် စတင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး ပရိသတ်သုံးထောင်ခန့် လာရောက်အားပေးကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ သက်တမ်းခုနစ်နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော နှင်းဆီအဖွဲ့သားများ၏ ဖျော်ဖြေပွဲတွင် ယင်းအဖွဲ့၏ ပုံစံအတိုင်း နိုင်ငံတော်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သည့်ကိစ္စများ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် လက်ရှိ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများ စသည်တို့ကို ပရိသတ်များ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ပျက်လုံးများဖြင့် ည ၁၂ နာရီခန့်အထိ ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
အငြိမ့်ပွဲပထမရက်တွင် သရုပ်ဆောင်မေကဗျာ မပါဝင်ခဲ့သည့်အပေါ် လာရောက်ကြည့်ရှုသူများကြား ပြောဆိုမှုများ ရှိနေပြီး အခြားဖျော်ဖြေမှုများ၌ ကျေနပ်မှုရှိကြောင်း ပရိသတ်များကပြောသည်။ ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ် ဈေးနှုန်းများမှာ ကျပ်သုံးသောင်း၊ နှစ်သောင်း၊ တစ်သောင်းနှင့် ခုနစ်ထောင်တို့ဖြစ်ပြီး မည်သည့်ရုပ်သံလိုင်းတွင်မှ ထုတ်လွှင့်ပြသမည်မဟုတ်ဘဲ ဒုတိယညကို ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက် ညတွင် ဆက်လက်ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်သည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီးနဲ့ စာရေးဆရာ ကိုတာတို့ဟာ မကြာသေးခင်က ဘူတန်နိုင်ငံသို့ လေ့လာရေး ခရီးအဖြစ် သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘူတုန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုနဲ့ တမျိုးသားလုံး အသားတင်ပျော်ရွှင်မှုဆိုင်ရာတွေ ဘယ်လိုချိတ်ဆက်သင့်သလဲ ဆိုတဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဦးကိုကိုကြီးကို အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ အပါအ၀င် ဘူတန် ခရီးအတွေ့အကြုံကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် လင်းသန့်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ ဦးကိုကိုကြီးခင်ဗျား၊ မကြာသေးခင်က ဘူတန်နိုင်ငံကို လေ့လာရေး ခရီးသွားဖြစ်ခဲ့တာလေး သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ ကျနော် ဘူတန်ကို လေ့လာသူအဖြစ်နဲ့ တမျိုးသားလုံး အသားတင်ပျော်ရွှင်မှုတန်ဘိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုင်ရာ ချည်းကပ်ရှု့မြင်ပုံ အသစ်။ နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်တွေနဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို လေ့လာသူအဖြစ်နဲ့ တက်ခဲ့တာပါ။ ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ ကနေ ၃၀ ရက်နေ့ထိပါ။
မေး။ ။ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ တမျိုးသားလုံး အသားတင်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဘယ်လိုဆက်နွယ်နေလို့လဲ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေအရ နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တမျိုးသားလုံး အသားတင် ထွက်ကုန် တန် ဘိုး GDP နဲ့ တွက်ချက်ကြတာများတယ်။ တကယ့်တကယ်တော့ ဂျီဒီပီတိုးတက်နှုန်းကို ကြည့်ပြီး တော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဂျီဒီပီ တိုးတက် မှု ဆိုတဲ့ ထုတ်ကုန် အများစုက လက်တဆုပ်စာ လူတစုရဲ့ လက်ထဲမှာဘဲ ရှိနေပြီးတော့ အောက် ခြေ သာမန် ပြည်သူတွေ က လက်လုပ်လက်စား နွမ်း ပါးတဲ့ဘ၀က ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတွေက များတော့ ဂျီဒီပီ တိုးတက်ရုံနဲ့ တနိုင်ငံလုံး တိုးတက်တယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။
မေး။ ။ ဒီအယူအဆက ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ။
ဖြေ။ ။ ဘူတန်နိုင်ငံလို ဘုရင် အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံ သေးသေးလေးကနေပြီးတော့ Gross National Happiness အယူ အဆ ကို စတင် ဖော်ထုတ်လာတာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက်ရှိပြီ။ ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံများ အပါ အ၀င် နိုင်ငံပေါင်း ၆၈ နိုင်ငံမှာ ၂၀၁၁ မှာ Happiness (ပျော်ရွှင်မှု) နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာတွေ သူတို့ စတင်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘူတန်နိုင်ငံကဘဲ ဦးဆောင်ပြီးတော့ တမျိုးသားလုံး အသားတင် ပျော်ရွှင်မှု တန်ဘိုးကို နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်တဲ့ အညွှန်းကိန်းတခုအဖြစ် ဖေါ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေ တာတွေ့ခဲ့ရတယ်။
မေး။ ။ အဲဒီ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလေးကို ပုံပေါ်အောင် ရှင်းပြပေးပါလား။
ဖြေ။ ။ ဘူတန်မှာ နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာ က ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာက တကယ်တော့ ဘာသာရေးနဲ့နွယ်တဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံတဲ့ အယူအဆနဲ့ စီးပွားရေး စီမံကိန်း တွေ ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ ထည့်သွင်း တွက်ချက်လို့ရအောင် သိပ္ပံနည်းကျ ဘာသာရပ် ဆိုင်ရာ ရှု့ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ စဉ်းစားကြတဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာသူအဖြစ် ကျနော်နဲ့ စာရေးဆရာ ကိုတာတို့ သွားရောက် ပြီး လေ့လာသူအဖြစ်နဲ့ တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ လူမှု စိတ်ပညာရှင်တွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးပညာရှင်တွေ၊ ဒဿနိက ဗေဒ ပညာရှင်တွေ၊ ပညာရေး ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ စတဲ့ ပညာရှင်တွေ အားလုံးက တမျိုးသားလုံး ပျော်ရွှင်မှု တန်ဘိုးကို ဖွံ့ဖြိုးမှု ညွှန်းကိန်းမှာ ထည့်သွင်း တွက်ချက်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ အခြေခံ အားဖြင့် ထောက်တိုင် မဏ္ဍိုင်ကြီး ၄ ခုရှိတယ်။
မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒီ ထောက်တိုင် ၄ ခုဆိုတာ ဘာတွေလဲ။
ဖြေ။ ။ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နောက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု၊ ယဉ်ကျေးမှု မျိုးကွဲ များ ထိန်းသိမ်းမှု နဲ့ ကောင်မွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီး သူတို့က ထောက်တိုင် ၄ ခု အရေးကြီးတာ ကို ဆွေးနွေးကြတယ်။
မေး။ ။ အဲဒီ ထောက်တိုင် ၄ ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးကိုကိုကြီးလေ့လာမိသလောက် ရှင်းပြပေးပါ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုကို သူတို့က Economic Development တခုတည်းနဲ့ တင်မဟုတ် ဘဲနဲ့ Socio-economic လူမှုရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဟာတည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှု ဖြစ်ရမယ်။ နောက် တယောက်နဲ့ တယောက် မျှတ ညီမျှတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖြစ်ရမယ်။ သူတို့က ဒီလို ရှု့မြင်ကြတယ်။ နောက် တချက်က ဘာလဲ ဆိုတော့ Conservation of Natural Enviroment သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုကို လည်း အခြေခံ ထောက်တိုင်အဖြစ် ထည့်တွက်တယ်။ နောက် Cultural Diversity and Religions ယဉ်ကျေးမှု မျိုးကွဲ အစုံ တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု။ နိုင်ငံ တနိုင်ငံမှာ လူမျိုးငယ် လေးတွေ ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အဆောက်အအုံ ငယ် လေးတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ပေးဆပ်လိုက်ရတာမျိုး ပျောက်ပျက်သွားမယ့် ကိစ္စမျိုး၊ သူတို့မလိုလားဘူး၊ ဒါကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ် လို့ ပြောလို့မရဘူး။ ဒါကို တတိယ ထောက်တိုင်အဖြစ်နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု မျိုးကွဲတွေ အားလုံးထိန်းသိမ်း ရှင်သန်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ အရေးကြီးတယ်လို့ သူတို့ သတ်မှတ်တယ်။ နောက်တခုက Good Governance ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး တည်ထောင်နိုင်မှု ပေါ့။ သူက ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့4Pillers လို့ ခေါ်တဲ့ ထောက်တိုင် ၄ တိုင်နဲ့ အဖြေထုတ်တယ်။
မေး။ ။ ဒီထောက်တိုင် ၄ ခုကို ဘယ်လို နယ်ပယ်တွေ ခွဲခြားပြီး ချည်းကပ်ကြတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လို တိုင်းတာမှုတွေ လုပ်တာလဲ။
ဖြေ။ ။ လေ့လာတဲ့ နယ်ပယ် ၉ ခု သတ်မှတ်တယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Physical Health, Mental Health ကို တိုင်းတာတယ်။ Psycological Welding လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာယာ ၀ပြောမှု ကိုတိုင်းတာ တယ်။ Cultural Diversity, ယဉ်ကျေးမှု မျိုးကွဲများအားလုံး ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု၊ Ecological ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ နောက် Time Use ဆိုတာကိုတိုင်းတာတယ်။ လူမျိုးတမျိုးက အိပ်ချိန် ပျမ်းမျှ ဘယ်လောက်ရှိတယ်။ အလုပ်ချိန် ဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာလည်း တိုင်းတယ်။ ဒီလို တိုင်းတာမှုတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်တယ်။ နောက်လူနေမှု အဆင့် အတန်း Standard of Living ကိုလည်း တိုင်းတယ်။ ပညာရေးအဆင့်အတန်းကို တိုင်းတယ်။ နောက်တခါ လူ့အဖွဲ့အ စည်းရဲ့ အရေးပါမှု၊ ဒါတွေကိုတိုင်းတယ်။
မေး။ ။ နောက်ထပ် ဘာတွေ သိခဲ့ရသေးလဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဘယ်လို စဉ်းစားမိလဲ။
ဖြေ။ ။ များသောအားဖြင့် နိုင်ငံတော်လို့ ဆိုတဲ့ဟာကို အာဏာရ အသိုင်းအ၀ိုင်းက သူတို့ကိုယ် သူ တို့ နိုင်ငံတော် လို့ ကိုယ်စားပြုပြီး သုံးနှုန်းနေတာဟာ တကယ့်တကယ်က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို စဉ်းစားတဲ့ အခါမှာ Community ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍ အရေးပါမှု မရှိရင် ဒါကို သူတို့က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလို့ မသတ်မှတ် ဘူး။9Domains ဆိုပြီး သူတို့က လေ့လာတဲ့ နယ်ပယ် ၉ ခု ရှိတယ်။ အဲဒီကနေ တိုင်းတာတဲ့ အသေးစိပ် အချက်အလက် အားလုံး ၃၃ မျိုး ဆင့်ပွား ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒါတွေကို အညွှန်းကိန်းတွေ လုပ်ပြီး မက်ထရစ်စနစ်နဲ့ တွက်ပုံတွက်နည်းတွေနဲ့ တိုင်းတာပြီးတော့မှ ဒီနိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အလွန်အမင်း လား၊ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှု အမြင့်ဆုံး အခြေအနေမှာ ရှိသလား၊ အလယ်အလတ်မှာ ရှိသလား၊ ဒါမှ မဟုတ် ရင် သာမန်ထက်နိမ့်တဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေလား၊ လုံးဝ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှု မရှိတဲ့အခြေအနေမှာ ရှိသ လား၊ အစရှိသဖြင့် အုပ်စုတွေ ခွဲခြားတယ်။ အဲဒါတွေကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ထောင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက် မှာ ခေတ်သစ် ပါရာဒိုင်းအဖြစ်နဲ့ ထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့ ပေါ်လစီ Recommendation မူဝါဒဆိုင်ရာ အကြံပြု ချက်တွေအဖြစ်နဲ့ ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ ကာလ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့တကွ ဆွေး နွေးစဉ်းစားနေကြတာပါ။
မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း GDP တွေ တက်လာတယ် ဆိုပြီး ကြွေးကြော်နေတာတွေ့ရတယ်။ ဒါကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာပြီလို့ ပြောလို့ရမလား၊ ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ မူဝါဒ ချမှတ်သူတွေအနေနဲ့လည်း GDP ဂဏန်း ၂ လုံး တိုးတက်တယ်ဆိုတာကို ဂုဏ် ယူ ၀ံ့ကြွားပြီး ပြောနေမယ့် အစားတကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေ ဟုတ်ရဲ့လား ကျနော်တို့ အောက်ခြေ ပြည်သူတွေရဲ့ လူ နေမှု အဆင့်အတန်း၊ စိတ်ခံစားမှု အခြေအနေ၊ သူတို့ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ပါဝင်နိုင်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍ စသဖြင့် အဲဒါတွေ ကိုပါ ထည့် သွင်း စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီ အခြေခံ အယူအဆ လောက်ကို သတိပြုမိတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးက အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းတွေဆီကို ဦးတည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။
မေး။ ။ ဘူတန်နိုင်ငံကရော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ရင် သူတို့က ဘယ်အဆင့်မှာ ဘယ်လို ညွှန်းကိန်း ရှိလဲ။ ဘူတန်နိုင်ငံကို ဘယ်လို မြင်မိလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့က ရက်ပိုင်းဘဲ လေ့လာခဲ့ရတာပါ။ ကျနော်ပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းလည်း နောက်ဆက်တွဲ ညီ လာခံ တွေ ရှိပါသေးတယ်။ အချိန်မရလို့ ပထမပိုင်း ၃ ရက်ဘဲ လေ့လာသူအဖြစ် တက်ခဲ့တာပါ။ အဓိက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက လူဦးရေအားဖြင့် ၆ သိန်းကျော် ၇ သိန်းလောက်ဘဲ ရှိတဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံ လောက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံလေးက ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆကို ကမ္ဘာကို တင်ပို့နိုင်တယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နမူနာပြ နိုင်တဲ့ နိုင်ငံလေးဖြစ်နေတာပေါ့။ နောက်တခုကလည်း ဘုရင် အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံလေးကနေ ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို လူထု အုံကြွမှုနဲ့ပြောင်းတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ ဘုရင် ကိုယ်တိုင်က ပြောင်းပေးတာကလည်း ကျနော်တို့အတွက် အတုယူ စရာဖြစ် ပါတယ်။ သူတို့ နောက်ဆုံး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ လက်မှတ်ထိုး ပေးလိုက်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အရဆိုရင် လွှတ်တော်ရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံ အများစုက အစိုးရကို အယုံအကြည်မရှိ အဆိုတင်သွင်းပြီး ဖြုတ်ချနိုင်တဲ့ အခန်း တွေဟာ ကျနော်တို့အတွက် လေ့လာစရာဘဲ။ အဲဒီ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကဘဲ ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို အ တည်ပြုခဲ့တာ။ ဟိုမှာလည်း ပဉ္စမမြောက် ဘူတန်ဘုရင်မင်း ဆက် ကနေပြီးတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်နေတာ တွေဟာ နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့လေ့လာစရာ သင်ခန်းစာတွေ အဖြစ် တွေ့ရတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ အတွက် အကျိုးရှိလိမ့် မယ်လို့ ထင်တယ်။
မေး။ ။ ဘူတန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတော် စည်းစနစ်ကျကျနဲ့ လုပ်ဆောင် ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ ကန့်သတ်မှုများတာတွေပေါ့။ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော ဘာတွေလေ့ လာခွင့် ရခဲ့ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကလည်း သူတို့ ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သဟဇာတဖြစ်အောင် စီမံတဲ့နေရာ မှာ ခရီးသွား လုပ်ငန်းကို သူတို့က Low Volume နည်းနဲ့ လုပ်တယ်။ အများကြီး ၀င်လာတာ ထက်ကို ၀င်လာတဲ့သူ နည်းနည်းလေး ကနေပြီးတော့ သူတို့ဆီမှာ လာရင် အနည်းဆုံး ငွေကြေး ဘယ်လောက် သုံးရမယ်ဆိုတ High Earn ကို သတ်မှတ် ထား ပြီးတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ထိန်းချုပ်ထားတာပေါ့။ ဆိုလိုတာကတော့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကနေ ၀င်ငွေလည်း ရရ မယ်။ နောက်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အဆောက်အအုံတွေကိုလည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရေးဆိုတဲ့ အယူအဆ၂ ခုကို သူတို့က ထိန်းပြီး လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်။ ဘာဘဲ ပြောပြော အားသာချက် တွေ၊ အားနည်းချက်တွေတော့ ရှိနေတာအမှန်ပါဘဲ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း Tourism ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ လုပ်တဲ့နေရာမှာ Cutural Value တွေ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုတွေ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းနဲ့ကို မျှ ပြီး လုပ်သွားရမှာပါ။
မေး။ ။ ဘူတန်ရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံတိုးတက်မှုနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Happiness ဆိုတဲ့ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့မှု ဆိုင်ရာတွေဟာ ဟန်ချက်ညီတယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ သူကတော့ နိုင်ငံလည်း သေးတယ်။ လူဦးရေလည်း နည်းတယ်ဆိုတော့ အားလုံးကို ကျနော်တို့နဲ့ ထပ်တူ ပြုလို့ မရပါဘူး။ အချိန်ကလည်း သိပ်မရတော့ အသေးစိပ် လေ့လာချိန် များများ မရခဲ့ဘူး။ သူတို့ဆီမှာ လမ်း။ တံတား တည်ဆောက်ရေးတွေက အိန္ဒိယကနေ အကူအညီပေးတာတွေ များတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ ဆက်ဆံရေးလည်း များတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံကြီးတွေကြားမှာ တည်ရှိနေတဲ့ ကျနော်တို့ လို နိုင်ငံငယ်လေးတွေဖြစ်တာချင်းတူတယ်။ သူလည်း တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယကြားမှာ တည်ရှိတဲ့နိုင်ငံငယ်လေး တခုပါ။ ဒီလို နိုင်ငံကြီးတွေကြားထဲက နိုင်ငံငယ်လေးတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အမျိုးသား အမှတ်သရုပ် ( Identity) ကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရမလဲ ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီထက် ပိုပြီး ကျယ်ပြန့် တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ လူထုပါဝင်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် တက်တက်ကြွ ကြွနဲ့ ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ပွဲမျိုးတွေ ကျနော်တို့ အများကြီး လုပ်ဖို့ လိုမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဘူတန်နိုင်ငံရဲ့ လူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ရော ဘာတွေ မြင် တွေ့ခဲ့ရလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ သွားတဲ့ ကာလက တိုတောင်းတော့ အပြည့်အစုံတော့ မလေ့လာနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်တို့ကို ဖိတ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းကတော့ Center for Bhutan Study ဆိုတာပါ။ သူကတော့ အစိုးရကနေ ကမကထ ပြုပြီးဖွဲ့ထား တာဖြစ်ပေမယ့် သူတို့လည်း တော်တော်လေး လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ရှိတာတွေ့ ရပါတယ်။
ကိုကိုကြီးရဲ့ ဘူတန်အတွေ့အကြုံ ပြန်လည် ရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့ စနေနေ့မှာ အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလတွင် ရောင်းချတော့မည့် Ubuntu ဖုန်း OS လက်ကိုင်ဖုန်းများ
၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလက Ubuntu မိုဘိုင်း လည်ပတ်စနစ် အတွက် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု မန်နေဂျာ (Business Development Manager) ရာထူးတစ်နေရာ
ခေါ်ယူသည့် အခါတွင် Ubuntu ဖုန်း OS ကို ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ပြန်လည် ထုတ်ဖေါ် ပြသခဲ့သည်။
အဆိုပါ စနစ်အကြောင်း သတင်း မီဒီယာများတွင် လပေါင်းများစွာ အကြိမ်ကြိမ် ဖေါ်ပြခဲ့ကြပြီး၊ ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ လကုန်ပိုင်းက အဓိက ပါဝင်မည့် Ubuntu Phone apps (၁၂) ခုကို ပြုလုပ် ဖန်တီးနိုင်မည့် Developers များကို Canonical မှ ရှာဖွေခဲ့သည်။ ထို့နောက် လာမည့် အောက်တိုဘာ လတွင် Ubuntu ဖုန်း OS လက်ကိုင်ဖုန်းများကို ပထမဦးဆုံး အနေဖြင့် ဈေးကွက်တွင် တွေ့မြင်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း Canonical ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်သူ Mark Shuttleworth က ပြောကြားခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး ဗားရှင်းသည် Ubuntu Desktop apps များကို ဖုန်းလည်ပတ် စနစ်တွင် မောင်းနှင်နိုင်ဦးမည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် နောင်လာမည့် ဗားရှင်းများတွင် ထိုသို့ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ရန် ပြုလုပ်မည်ဟု ဆိုသည်။ ၄င်းသည် window စနစ်သုံး apps များကို လည်း sever များနှင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု Mark Shuttleworth က ပြောကြားခဲ့သည်။
Friday, February 08, 2013 လပြည့်ဝန်း 1 comment
MSF ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ Arjan Hehenkamp (ယာ) နှင့် MSF အဖွဲ့၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ Perer Paul de Groote (ဝဲ) (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွင် နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ (MSF/AZG) က မွတ်စလင်များဘက်မှ ပါဝင်ပက်သက်မှု မရှိခဲ့ကြောင်း လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ပေးရန် အစိုးရထံ တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်တွင် MSF အနေဖြင့် နောက်ကွယ်မှ ပါဝင်ပက်သက်ခဲ့သည်ဆိုသည့် ကောလာဟလ များကြောင့် ၎င်းတို့ အဖွဲ့အစည်းကို အစိုးရစစ်တပ်မှ လာရောက်ရှာဖွေသော်လည်း ဘာမှမတွေ့ခဲ့သည်ကို အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာများက အသိအမှတ် ပြုပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ယနေ့အချိန်အထိ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ပေးမှု မရှိသေးကြောင်း MSF ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ Arjan Hehenkamp က ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
“ကောလာဟလတွေ ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပြီးတော့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အဲဒီ ကောလာဟလပေါ်မှာ မူတည် ဆုံးဖြတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရှာဖွေခံရတဲ့ အဆင့်အထိ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အများကြီး ထိခိုက်နစ်နာပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
MSF သည် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကိစ္စကိုသာ ဦးတည်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း ကိစ္စ၊ ဘာသာရေး ကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးကိစ္စ များအပေါ် စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ယခု ဖြစ်ပျက်မှုများတွင် မည်သူမှားသည်၊ မည်သူမှန်သည်ကို မသုံးသပ်လိုကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်လူမျိုးကိုမဆို ကူညီပေးနေသည် ဆိုသော အမြင်များဖြင့် သုံးသပ်ပေးရန်အတွက် အစိုးရနှင့် ဒေသတွင်း လူထုကို မစ္စတာ Arjan Hehenkamp က တိုက်တွန်း လိုက်သည်။
MSF အဖွဲ့သည် ရခိုင်ဒေသတွင်သာ မကဘဲ တခြားသော ပဋိပက္ခဖြစ်ပျက်နေသော နေရာများတွင်လည်း အလုပ်လုပ်နေသော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်တွင် အနည်းအကျဉ်းမျှ ပါဝင်ပက်သက်ခဲ့လျှင်လည်း ညွှန်ကြားရေးမှူး တဦးအနေဖြင့် အရင်ဦးဆုံး ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုလက်ရှိ အချိန်တွင် MSF ကို ရခိုင်လူထုအနေဖြင့် လက်မခံနိုင်ခြင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခ၏ သဘောသဘာဝ များကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ MSF တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည့် နှစ် ၂၀ ကာလအတွင်း ယခုကဲ့သို့ လူမျိုးစု ၂ စုအကြား ကြားညပ်ခံရသည့် ဖြစ်ရပ် မတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးကြောင်း သူက ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဆရာဝန်တွေဟာ ဆေးကုသမှု လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ကုသပေးနေတာ၊ ကျန်တဲ့အပေါ်မှာ ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့ ပြောခဲ့ရင် ငြင်းဆိုမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သေချာတာ တခုကတော့ လူမျိုးစု ၂ ခု အတွင်းမှာ လူမျိုးစုတစုကနေ နောက်တစုကို မြင်တဲ့အမြင်ကြောင့် ကျနော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာ လာထိခိုက်မှု ရှိတာတော့ အမှန်ပါပဲ” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
လူမျိုးစု ၁ စုကို ကူညီသည့် အတွက်ကြောင့် နောက်လူမျိုးစုက အမြင်မကြည်လင် မှုများသည် ယခုကဲ့သို့ ပြဿနာ မဖြစ်ခင်ကတည်းက ရှိနေပြီးသား ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ယခု ဖြစ်စဉ်၌ ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းမှ ၀န်ထမ်းတချို့သည် လက်နက်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပါဝင်ပက်သက်မှုများ ရှိသည်ဟု စွပ်စွဲမှုများ ရှိနေသည်ကိုလည်း သူက ငြင်းဆန်ကြောင်း Arjan Hehenkamp က ဆိုသည်။
MSF အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြား တွင် ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် အလုပ်လုပ်ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်း တခုဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်ရှည် ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှုပေးသော အဖွဲ့စည်းတခုဖြစ်သကဲ့သို့ အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှုများကိုလည်း လုပ်ပေးနေကြောင်း MSF အဖွဲ့၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ Perer Paul de Groote က ရှင်းပြသည်။
MSF အဖွဲ့၏ အကြီးမားဆုံး စီမံကိန်းသည် HIV နှင့် တီဘီရောဂါ ဝေဒနာရှင်များကို ၀န်ဆောင်မှု ပေးသော
လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် HIV လူနာများမှ လူ ၅ သောင်းမျှ ဆေးဝါးကုသမှု ကုထုံးရရှိနေပြီး MSF အဖွဲ့မှ လူ ၃ သောင်းကို ကုသမှု ပေးထားကြောင်း သိရသည်။ တီဘီ လူနာများအတွက် နှစ်စဉ် လူ ၃ ထောင်ကို ကုသမှုပေးနေကြောင်း၊ အဆိုပါ လူနာ များသည် HIV နှင့် ယှဉ်တွဲကာ ဝေဒနာ ခံစားနေသော လူနာများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တုိ့ နောက်ထပ် တိုးချဲ့ကုသပေးနေတာက ဆေးယဉ်ပါးနေတဲ့ တီဘီ လူနာတွေအတွက် ကုထုံးတွေ ထပ်ပေး နေပါတယ်။ မကြာခင်ကမှ အစိုးရကလည်း ကချင်ဒေသမှာ ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် အကူညီပေးလို့ ရတယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အဲဒီဒေသခံတွေကို အကူအညီတွေ ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု မစ္စတာ Perer ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် MSF အဖွဲ့၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ၀န်ထမ်းများကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ချောမောစွာ ဆောင်ရွက်မရအောင် လူတချို့က ခြိမ်းခြောက်နှောင့်ယှက်မှုများနှင့် တွေ့ကြုံနေရကြောင်း၊ အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သော လူနာများကို ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းပေးရာတွင်လည်း အခက်အခဲများတွေ့ကြုံနေရပြီး အချိန်မီ မရောက်ရှိသောကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုများရှိနေကြောင်း MSF အဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန် ထားသည်။
၎င်းတို့ အဖွဲ့ရောက်ရှိခဲ့သော ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် အာဟာရချို့တဲ့မှု ပြင်းထန်သော ကလေးငယ်များကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အရေပြားရောဂါ၊ နာတာရှည် ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ သန်ထခြင်း၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါနှင့် ၀မ်းပျက် ၀မ်းလျောရောဂါများ ဖြစ်ပွားနေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါဝင်သည်။
MSF အနေဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိဖြင့် မည်သူ့ကိုမဆို ၎င်းတို့နှင့် လာရောက် စကားပြောရန် ကြိုဆိုထားကြောင်း၊ ရခိုင်လူထု အနေဖြင့် ယင်းတို့ကို ပြန်လည်လက်ခံရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များထံတွင် အကြံဉာဏ်များ ရယူခဲ့ကြောင်း Arjan Hehenkamp ကပြောသည်။
“ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့လည်း စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ ရဟန်းပျိုအဖွဲ့ တွေနဲ့လည်း စကား ပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ရလဲ ဆိုရင် အရင်ဦးဆုံး စပြီးတော့ ညင်ညင်သာသာနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါ၊ တစ်ခုခုမလုပ်ခင် တိုင်ပင်ပါ၊ သူတို့ကိုမေးမြန်းပါ၊ ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတချို့၊ လူတချို့နဲ့ စကားပြောနိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုး လုပ်ပါလို့ အကြံပေးပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက် အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်း တစ်သောင်းကျော်ကို အရေးယူခဲ့
"အစိုးရကောင်း အစိုးရသန့်" ဖြစ်ရေးကြွေးကြော်ထားတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဟာ တာဝန်ယူချိန်ကစပြီး အခုထိ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းပေါင်း တစ်သောင်းခုနစ်ထောင်လောက် အရေးယူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလကနေ ၂၀၁၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ ရဲအရာရှိတွေ အများဆုံးပါဝင်တဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းပေါင်း တစ်သောင်း ခြောက်ထောင် ကိုးရာ ငါးဆယ့်နှစ်ယောက် ကို အရေးယူအပြစ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ဒီသီတင်းပတ်အတွင်း အစိုးရက လွှတ်တော်ကို တင်ပြခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ပါဝင်ကြောင်း AFP သတင်း က ဖေါ်ပြပါတယ်။
သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရကောင်းတစ်ရပ်အတွက် လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ ၀န်ကြီးတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အရေးယူခဲ့ကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အရေးယူခံရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေထဲမှာ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူပေါင်း (၃၈၀)၊ ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခံရသူပေါင်း (၄၉၀၀)ကျော်၊ အလွဲသုံးငွေ ပြန်ပေးဖို့ အမိန့်ချခံရသူ (၈၀) ရှိပြီး၊ အရေးယူခံရသူ ရဲဝန်ထမ်း (၆၈၉)ယောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ရာထူးချခံရသူ၊ သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်ခံရသူတွေရှိကြောင်းလည်း ဖေါ်ပြထားပေမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် အသေးစိတ်တွေကိုတော့ ဖေါ်ပြမထားဘူးလို့ AFP က ဆိုပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက် အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်း တစ်သောင်းကျော်ကို အရေးယူခဲ့ "အစိုးရကောင်း အစိုးရသန့်" ဖြစ်ရေးကြွေးကြော်ထားတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဟာ တာဝန်ယူချိန်ကစပြီး အခုထိ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းပေါင်း တစ်သောင်းခုနစ်ထောင်လောက် အရေးယူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလကနေ ၂၀၁၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ ရဲအရာရှိတွေ အများဆုံးပါဝင်တဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းပေါင်း တစ်သောင်း ခြောက်ထောင် ကိုးရာ ငါးဆယ့်နှစ်ယောက် ကို အရေးယူအပြစ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ဒီသီတင်းပတ်အတွင်း အစိုးရက လွှတ်တော်ကို တင်ပြခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ပါဝင်ကြောင်း AFP သတင်း က ဖေါ်ပြပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရကောင်းတစ်ရပ်အတွက် လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ ၀န်ကြီးတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အရေးယူခဲ့ကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အစီရင်ခံစာအရ အရေးယူခံရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေထဲမှာ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူပေါင်း (၃၈၀)၊ ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခံရသူပေါင်း (၄၉၀၀)ကျော်၊ အလွဲသုံးငွေ ပြန်ပေးဖို့ အမိန့်ချခံရသူ (၈၀) ရှိပြီး၊ အရေးယူခံရသူ ရဲဝန်ထမ်း (၆၈၉)ယောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ရာထူးချခံရသူ၊ သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်ခံရသူတွေရှိကြောင်းလည်း ဖေါ်ပြထားပေမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် အသေးစိတ်တွေကိုတော့ ဖေါ်ပြမထားဘူးလို့ AFP က ဆိုပါတယ်။
ယနေ့ ကျင်းပမည့် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ (၈-၂-၂၀၁၃၊ သောကြာနေ့ အစီအစဉ်များ
ယနေ့ ကျင်းပမည့် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ (၈-၂-၂၀၁၃၊ သောကြာနေ့ အစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၁) နိုင်ငံတော် သမ္မတထံမှ ပေးပို့သော ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများ အဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန် ပေးလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သ၀ဏ်လွှာကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခြင်း။
၂) ဒုတိယ ၀န်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန် ပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သ၀ဏ်လွှာကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသား စီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်း ကော်မတီ၏ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာကို ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်း။
၄) JICA မှ တရားဝင် ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီ ချေးငွေ ရယူရေး ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု အဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်က ဖတ်ကြား ရှင်းလင်း တင်သွင်းခြင်း။
၅။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက က နိုင်ငံတော် သမ္မတထံမှ ပေးပို့သော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သ၀ဏ်လွှာကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခြင်း။
၆။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက က နိုင်ငံတော် သမ္မတထံမှ ပေးပို့သော ဒုတိယ၀န်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သ၀ဏ်လွှာကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
၈။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နယက က ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးလိုသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း လွှတ်တော်သို့ ကြေညာခြင်း။
၉။ ဂျပန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA)မှ တရားဝင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ ချေးငွေ (ODA Loan) ရယူရေးကိစ္စ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်က ဖတ်ကြားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
၁၀။ အဆိုပါ တရားဝင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ ချေးငွေ (ODA Loan) ရယူရေးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
၁၁။ အဆိုပါတရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီချေးငွေ (ODA Loan) ရယူရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။
၁၂။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်နေမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ လွှတ်တော်သို့ အသိပေးတင်ပြခြင်း။
၁၃။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအပေါ် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီနှင့်ဦးသောင်းဟန်၊ ယင်းမာပင် မဲဆန္ဒနယ်တို့၏ ထပ်မံပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန် အချက်များနှင့်စပ်လျဉ်၍ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲအလိုက် အတည်ပြုရန် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း။
၁၄။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း တစ်ရပ်လုံးကို ထပ်မံပြင်ဆင်ထားသည့် အတိုင်းအတည်ပြုရန် လွတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း။
၁၅။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပပျောက်ရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်သဘောကွဲလွဲသည့်အချက်များနှင့်တိုင်ရိုက် သက်ဆိုင်သော ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်လိုသည့် အချက်များအား အောက်ပါ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေးခြင်း- (က) ဒေါ်ခင်စန်းလိုင်း၊ ပုလဲ မဲဆန္ဒနယ်၊ (ခ) ဦးစိုင်းသန်းနိုင်၊ ဖာပွန်မဲဆန္ဒနယ်၊ (ဂ) ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)။
၁၆။ လာတ်ပေးလာတ်ယူမှု ပပျောက်ရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော် နှစ်ရပ် သဘောကွဲလွဲသည့် အချက်များကို အတည်ပြုရန် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း။
၁၇။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက အင်တာနက်တွင် ဖော်ပြ ပါရှိသော ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား၏ Above the Law ခေါင်းစဉ်ပါ ဝေဖန် ချက်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်သို့ အသိပေးတင်ပြခြင်း။
ဟုပ် ပါ့ မ လား မောင် ကာ လု ရဲ့ ????
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် တင်ဒါစိစစ် ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီက ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူထားရာ Red Link ကုမ္ပဏီလည်း လျှောက်ထားလိုက်ပြီး လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိမည် ဆိုပါက ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်များကို အိမ်တိုင်ရာရောက် အခမဲ့လိုက်လံဝေငှပေးမည်ဟု ကုမ္ပဏီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းဆွေလှိုင်က ပြောဆိုသည်။ Red Link ၏ ဝေဖန်မှုခံနေရသော အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု နှေးကွေးခြင်းကိုလည်း ဦးမင်းဆွေလှိုင်က ဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် ကျေနပ်မှု မရှိဟုဆိုသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမှာ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်း၏ သားဖြစ်သူ ဦးတိုးနိုင်မန်းဖြစ်ရာ ယခုလအတွင်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေသည့် ကုမ္ပဏီများကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုများ ရှိနေသည်ဟူ သည့် ထင်မြင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဦးမင်းဆွေလှိုင်က ရှင်းလင်းထားသည်။ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကြိုးနီစနစ် လွှမ်းမိုးနေသည်ဟုဝေဖန်လိုက်သူ Red Link ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းဆွေလှိုင် ကို ၂ဝ၁၃ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင်အင်တာနက် သုံးစွဲသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အတွက်ပြင်ဆင်နေမှု Red Link ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ထမ်းတို့၏ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတို့ကို မဇ္ဈိမက မေးမြန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး မေးချင်တာက ဖုန်းကဒ် ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင် တယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လောက် ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ဈေးနှုန်းက နိုင်ငံတကာဈေးပဲပေါ့။ နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းသလဲ။ ဒီလောက်ပဲပေါ့။ ဈေးနှုန်းက သူများ မှာ ရောင်းနိုင်ပြီး ကိုယ်က မရောင်းနိုင်ရင် တစ်ခုခုမှားလို့ပေါ့။ ပြည်သူကတော့ နိုင်ငံတကာ ဈေးအတိုင်း လိုချင်တာ ပေါ့။ အကယ်၍ပေါ့ Red Link က ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုတွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် Red Link အနေနဲ့ အများပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဖုန်းကဒ်တွေကို ဘယ်ဈေးလောက်နဲ့ ရောင်းနိုင်မလဲဆိုတာ ပထမဆုံး မေးချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့က Zero Cost (အခမဲ့)တင် မဟုတ်ဘူး။ တစ်အိမ် တက်ဆင်း တံခါးခေါက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ ဝယ်ပါ လို့ သွားမှာပဲ။အလကားပေးရုံတင်မကဘူး အိမ်အရောက်လာပေးမှာ။မြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင် ခြောက်လအတွင်းပေးနိုင် ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး ဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်ခွဲ လောက်အတွင်း ပေးနိုင်ပါတယ်။ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်လောက် အတွင်း အကုန်အပြီး ပေးနိုင်ပါတယ်။ Red Link က ဖုန်းကတ်ကို အခမဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့ ဆိုတော့ ဝမ်းသာစရာပါပ။ဲ ဒါပေမယ့် အခုRed Link က ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ အင်တာနက် သုံးစွဲခ ဈေးနှုန်းတွေက တော်တော်များနေတယ်လို့ဝေဖန်ကြပါ တယ်။ အခုဖုံးကတ် ကိစ္စ ပြောလာတဲ့အခါမှာ လက်တွေ့ကော ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား။ ဈေးများတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လည်း ဝန်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မူကိုက Initial Price (ကနဦး ဈေးနှုန်း) ကို Zero(သုည)နဲ့ ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း အစိုးရက တောင်းဆိုထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း တစ်နိုင်ငံလုံး လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ဒီနေ့သာပေးလိုက်။ မနက်ဖြန် ကျွန်တော်တို့ Initial Cost ကို Zero ပေးလို့ရတယ်။ အခုက Full (အပြည့်အဝ) လိုင်စင် မရှိသေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ဆက်သွယ်ရေးအောက်၊ ရတနာပုံ တယ်လီပအောက်မှာ လုပ်နေရတာဆိုတော့ လွတ်လွတ် လပ်လပ် လုပ်ခွင့်မရသေးဘူး။ သူတို့သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိတယ်။ သူတို့ကို Sharing လုပ်နေရတာတွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေကTransaction Cost တွေပဲ။ ဒါတွေက ပေးနေရတာပဲ။ ကိုယ်တို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် သာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် မရှိတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနှုန်းနဲ့ ရောင်းနိုင်ပါတယ်။ REd Link ရဲ့အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုတွေ အပေါ်မှာလည်းတော်တော်လေး ဝေဖန်နတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာကော ဘာတွေပြောချင်ပါသလဲ။ Service (ဝန်ဆောင်မှု) ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီService ကကျေနပ် ဖွယ်ရာမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မကျေနပ်ပါဘူး။ သုံးတဲ့သူကတော့ ကောင်းကောင်းသုံးချင်တာပဲ။ ဒါကို Service ပေးဖို့က ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေမှာ တာဝန်ရှိပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့က ကြားခံ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးက Miss Management (လွဲချော်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှု)နဲ့ မလုပ်ပေးနိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့က အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ပြည်သူနဲ့သာ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက် ခွင့်ပေးလိုက်ရင် နိုင်ငံတကာနဲ့ ချိတ်ခွင့်ပေးရင် ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံး Quality (အရည်အသွေး) ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝေဖန်နေတာလည်း တကယ် မကောင်းလို့ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာလည်း Limitation (အကန့်အသတ်တွေ) ရှိတယ်။ ဒါဆို အင်တာနက် အမြန်နှုန်းတွေကောင်းဖို့ ကောဘာတွေ လုပ်ဖို့ လိုမယ်ထင်လဲ။ လိုအပ်တာက ပုဂ္ဂလိက ဆန်ဆန် အားလုံးကလုပ်မှရမယ်။ ကြိုးနီစနစ်၊ ဗျူရိုကရေစီစနစ် မရှိမှရမယ်။ ဒီလုပ်ငန်းက မိနစ်နဲ့အမျှ နည်းပညာကို ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်။ နောက်တစ်ချက်ကဈေးကွက် ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဖွင့်ပေးစေချင် တယ်။ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Mobil Project တွေမှာ Red Link အနေနဲ့ ဘာကြောင့်များ ၀င်မပါ ဖြစ်တာလဲ။ Red Link အနေနဲ့ အစည်းအဝေးတွေ တက်ခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ ငွေကြေးတွက်ချက်မှုမှာ Per line Cost က နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ရင် သုံးဆလောက်များနေတယ်။ အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က အဲဒီပရောဂျက်ပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု မရှိလို့ မပါခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို သန်းခြောက်ဆယ်သော ပြည်သူအတွက် စဉ်းစားတဲ့ National Level ပရောဂျက်ကို စဉ်းစား တာပညာရှင် ပါကိုပါရမယ်။ စီးပွားရေးပညာရှင်၊ နည်းပညာ ပညာရှင် ပါရမယ်။ ဒါတွေမပါဘဲ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ဆွဲခဲ့တာလေးကို နေရှင်နယ်ပရောဂျက်အဖြစ် ဆွဲခဲ့တာကိုက မှားတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်။ နောင်တစ်ချိန်လုပ်တဲ့ ပရောဂျက်တွေ ဆိုရင်တော့ နားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေ၊ နိုင်ငံတကာ နဲ့ ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေ ဖိတ်ခေါ်သင့်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ပရောဂျက် ဏူညေက တစ်နှစ်တစ်လကြာရင် မြတ်မယ်ဆိုခဲ့တယ်။ ဒီလို မြတ်တယ်ဆိုတာပုံမှန် စီးပွားရေးမှာ မမြတ်ပါဘူး။ဘိန်းရောင်းမှပဲ မြတ်မယ်။ အခုကတော့ ဈေးနှုန်းကိစ္စမှာ တော်တော်လေး ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လည်းကြားပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ကုမဏီတွေကိုလည်း စစ်ဆေးနေတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ Red Link ကုမဏီ ကောပါဝင်ပါလား။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အစစ်မခံရတဲ့အတွက် သေချာမသိပါဘူး။စစ်ဆေးခံရတာကိုတော့ ဘာမှန်းမသိဘူး။ ကျွန်တော် တို့ကလည်း ဘာမှပတ်သက်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်လို့ ယူဆလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့က အော်ပရေတာပဲ လုပ်ချင်တယ်။ အခုဆို ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးလဲ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီအပြောင်းအလဲ အပေါ်မှာအကောင်း ဘက်က ဘာမျှော်လင့်လို့ ရနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ကောင်းသော အပြောင်းအလဲပဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကြားရတာကတော့ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်း ဦးစားပေးချင်တယ်လို့ သမ္မတကြီးက ညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း တကယ်မတတ်ဘဲနဲ့လုပ်နေတဲ့ ပညာရှင်တွေ ကြီးစိုးသွားမှာကို ကျွန်တော်တို့က မလိုလားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပညာရှင်ဘဝကနေ တစ်ဆင့်ချင်း တက်လာတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်း တစ်ကျပ်တစ်ပြားကအစ စိစစ်ပြီး လုပ်ကိုင်မှ ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးက လုပ်နိုင်တာပါ။ တစ်ကျပ်ရင်း တစ်ဆယ်မြတ်တဲ့ လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်တွေ မပါဘဲနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မဲ့ ကုမဏီ နှစ်ခုရှိပြီးပြီပေါ့။ ရတနာပုံ တယ်လီပို့နဲ့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ပေါ့ ။ နောက်နှစ်ခုကိုလဲ ထပ်ခေါ်ထားတော့ လေးခုပေါ့။ လေးခုတင် လုံလောက်မယ်လို့ ထင်ပါသလား။ အိုင်ဒီယာမျိုးစုံပေါ့။ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အများကြီှးကမလငလန မဖြစ်တော့ဘူး။ လေးခုဆိုတာ လုံလောက်တယ် ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့။ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ စပေးတာ က လေးခုထက်မကပေးသင့်တယ်ထင်တယ်။ ပြုတ်သွားနိုင်တာ ရှိသေးတာကိုး။ Sea Game မှာ ၀ိုင်ဖိုင်လွှင့်ခွင့် ကို Red Link က ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ စကားအသုံးအနှုန်းကိုတော့ နည်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ လုပ်ခွင့်ရတယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့က လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသလို ဖြစ်နေတယ်။ အခုဟာက ကျွန်တော်တို့က Sea Game မှာ ၀ိုင်ဖိုင် သုံးလို့ရအောင် အခမဲ့ လှူတာ။ အခုကဆက်သွယ်ရေးဘက်က ပြောတာက Red Link ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ပြောရရင်ရွှေတိဂုံမှာ ရွှေသင်္ကန်းကပ်ဖို့ လှူတာကို ရွှေသင်္ကန်းကပ်ခွင့် လိုင်စင် ပေးလိုက်သလို ဖြစ်နေတယ်။ နားမလည်လို့ ပြောတာလည်းဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့က ၂ဝ၁၃ Sea Game မှာ ဒီတိုင်းပြည်မှာ လုပ်လို့ Contribute လုပ်လို့ Free စပွန်စာ ပေးတာ၊ကုမ္ပဏီပေါင်း ၅ဝ လောက် ဝင်ပြိုင်တဲ့အထဲမှာမှ ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးတည်း ရခဲ့တာ။ အမှန်တကယ်က ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးတည်းပဲ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲတွေက တစ်ဦးမဟုတ်ဘူး။ နှစ်ဦးပေးပါဆိုလို့ Sky net ပါ ပါလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ Brand ကို ၂ဝ၁၃ Sea Game နဲ့ အတူ ကြော်ငြာမယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ် ဆိုတော့ အများပြည်သူတွေအမြင်မှာ Red Link ကခရိုနီတွေတော့ ရပြန်ပြီ ထင်မှာပေါ့။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က Contribute လုပ်တာပါ။ကျွန်တော်တို့က လှူဒါန်းတာပေါ့။ လှူဒါန်းတဲ့ ပမာဏနဲ့ညီတဲ့ ကြော်ငြာခွင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ပြန်ပေးမှာပေါ့။ ဘယ်နေရာတွေမှာ ၀န်ဆောင်မှု ပေးမှာပါလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ရထားတာကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းအတွက် ရထားပါတယ်။ ရန်ကုန်၊ ပုသိမ် (ငွေဆောင်)ပေါ့။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ Wifi Hotspot တွေ လွှင့်ပေးမယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဒီကာလမှာfree ပေးချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ မူချထားတာကလည်း free ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာပါဝင်ဖို့လည်း တကယ်ကို ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါကြောင့် Local ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတာကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အမြန်နှုန်းကိုရော ဘယ်လိုများ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးမှာပါလဲ။ အဲဒီကိစ္စကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ဒုဝန်ကြီး ဦးသောင်းတင်ကို သွားတွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ သူကလည်း အင်တာနက် မြန်ဆန်ရေးကိုတော်တော်လေး အာရုံစိုက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်း အင်ဂျင်နီယာတွေ Technician တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကိုလည်း အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်တွေ ပေးမယ်။ အဓိကကတော့ ဒီမှာက ပစ္စည်းတွေလည်းရှိ တယ်။Bandwidth တွေလည်းရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ Fully Utilized မလုပ်နိုင်ဘူး။ Poor Management ဖြစ်နေတယ်။ Poor Management ကဘာတွေကို ရည်ရွယ်ပါသလဲ။ Poor Management ကအစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ထမ်းတွေကိုင်တွယ်တဲ့အတွက် limitation တွေရှိမှာပေါ့။ lack of Technical Knowledge ပေါ့ ။ နောက်တစ်ခုက ဗျူရိုကရေစီစနစ်တွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ အိုင်တီသမားက Configuration တစ်ခု ပြောင်းဖို့အတွက်ကိုအထက်ကို စာတင်ရတယ်။ အထက်က ခွင့်ပြုမှဆိုရင် အထက်ကလည်း နားလည်ချင်မှ နားလည်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်က မြန်ဆန်ဖို့ ဆိုတာကိုကိုင်တွယ်တဲ့လူက နားလည်ဖို့လိုတယ်။ မမြန်သေးသရွေ့ ငါမှားနေတယ်ဆိုတာ သိရမယ်။ ငါမလုပ်နိုင်လည်း ငါထွက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ဒီဝန်ကြီးဌာန မှာရှိတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ level အထိက ရှိမှ ပြည်သူ ဗဟိုပြု ဆားဗစ်ကို သွားလို့ရမယ်။ ပြည်သူ ဗဟိုပြု တကယ်သွားချင်ရင်တော့ Mindset ကို ပြောင်းရမယ်။ပြည်သူက နှေးနေပါတယ်လို့ ပြောတာကို လက်ခံပြီးတော့ ငါဘယ်လိုမြန်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောင်းဖို့လိုနေပြီ။ အဲဒါကိုလည်း ဒုဝန်ကြီး ဦးသောင်းတင် ကို ပြောထားပါတယ်။ သူလည်း ကြိုးစားနေတယ်။ အခုဒီအပြောင်းအလဲမှာတော့ ကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ Sea Game အမြန်နှုန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လောက် ပမာဏအတွင်း ပေးရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထား တာ ရှိပါသလဲ။ Sea Game မှာ လိုအပ်တာကBandwith နဲ့သုံးတဲ့ အနေအထားညီမျှဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် Bandwith ကပြဿနာမရှိပါ ဘူး။ လိုတာကတော့ Poor Management မဖြစ်ဖို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်းပြောထားတာ ရှိပါတယ်။ အင်တာနက် မြန်ဖို့ဆိုရင် ပညာရှင်ကို နိုင်ငံခြားက ခေါ်စရာမလိုပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ပညာရှင်လက်ထဲကို တစ်ရက်လောက် ပဲပေးထည့်လိုက်ပါ။ မြန်လာပါလိမ့်မယ်။ အခုလက်ရှိ တစ်နိုင်ငံလုံး သုံးနေတဲ့ Bandwith က 14 Gဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မှန်းတာကနောက်ထပ် 10G အထက်တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ တကယ့်ကို Hight Speed နဲ့ သွားမယ် ဆိုရင်ပေါ့။ လာအိုမှာဆိုရင် Sea Game မတိုင်မီနဲ့ Sea Game အတွင်းမှာ Bandwith ကို သုံးဆချဲ့တယ်။ Sea Game မှာ ၀ိုင်ဖိုင်ပေးခွင့်ရတာက အရင်ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး လက်ထက်က လုပ်ခဲ့တာပါလား။ အဲဒါက တင်ဒါရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဒုဝန်ကြီး ဦးသောင်းတင်က ဒုဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ လုပ်တာပါ။ အရင်ဝန်ကြီးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ လက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာ သုံးနေရတာက ရှိနေတဲ့ Bandwith ထက်စာရင်နှေးတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါသလား။ Gateway မှာ ရှိတဲ့ Management က တော်တော်လေးကို အားနည်းနေတယ် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိသုံးတဲ့ အနေအထားနဲ့ဆို 14Gက လုံလောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုဘိုင်းသုံးတဲ့ User များနေတယ် ဆိုရင်တော့ မလုံလောက်ဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ Red Link Subscriber တွေဆိုရင်လည်းတော်တော်ကို ကြာပါတယ်။ အဲဒီတော့ Bandwith မရှိရင်ကျွန်တော်တို့က အရောင်း ခဏရပ်၊ရှိမှ ပြန်ရောင်း အဲဒီလို လုပ်နေရတယ်။ နောက်ဆုံးမေးခွန်းပါ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေကြမ်းအပေါ် ဘယ်လိုအမြင်ရှိပါသလဲ။ လက်ရှိဥပဒေကို ဝန်ကြီးကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလွန်းတာကို ထောက်ပြထားတယ်။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံတကာနဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာ အားလုံးကို ဆက်သွယ်ရေးက ကိုင်ထားတော့ ကြိုးနီစနစ်ဆန်တယ်လို့ ထောက်ပြချင်ပါတယ်။